Amụma Ọgụgụ | Martech Zone
Ọ bụrụ na enweghị m ihe ọ bụla m ga-ede banyere na blọọgụ m, m na-eme ụfọdụ nchọgharị ma chọta ụfọdụ njikọ dị egwu ma kesaa ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ewepụta oge ịlaghachi na saịtị m ma ọ bụ denye aha na ndepụta m, Achọrọ m ijide n'aka na anaghị m egbusi oge gị site na ọkara ịnwa ọkwa post.
N'agbanyeghị mgbalị ndị m na-eme, ụfọdụ n'ime post m bụ ndị na - egbu egbu na ndị ọzọ na - elebara anya. Mgbe m bidochara blọgụ ruo ọtụtụ afọ ugbu a, ọ gaghị ekwe m omume ịkọ ndị na-agụ akwụkwọ m. Echere m na ọ dị ka ihe na-agbachitere nchebe na-anwa ịkọ egwuregwu ọzọ. Otu egwuregwu bọọlụ na-emeri na-enwekarị ọgbụgba dị ukwuu na obere ọgbụgba. Ha na-egwu egwu ọ bụla dịka ọ bụ nke ikpeazụ. Football, ha na-ekwu, bụ egwuregwu nke sentimita asatọ.
Imeri na ịde blọgụ bụ otu. Enwere ike ịchụpụ nnukwu akara na-efunahụ ya, mana n'ozuzu, ha ga-aga n'ihu wee nweta nke mbụ. Enweghị m ike ibu amụma nke nke m posts (football = ejije) ga-m n'ime ọgwụgwụ mpaghara. Amaara m na nkwụsi ike na obere ịda mba ga-eme ka m rute ebe ahụ.
N'ihi ya, anaghị m echegbu onwe ma ma ọ bụ na ọ bụghị a post ga-abụ otu, naanị m maara na ọ bụrụ na m gaa n'ihu na-ede blọgụ mgbe niile ma na-ede blọgụ nke ọma na m ga-anọgide na-enweta ndị na-agụ (football = yardage). Asọmpi a siri ike.
Ugbu a, m na-emegide onye ọ bụla na ezumike, akwụkwọ akụkọ kachasị mma nke onye ọ bụla na 2008 na amụma onye ọ bụla maka 2009. Ezigbo mpi ahụ m, n'agbanyeghị. Asọmpi anaghị achọta oge iji biputere. Asọmpi adịghị eme nyocha ọfụma iji hapụ gị kernel nke ihe ọmụma ịchọrọ.
Ebube foto site na Brian Cassella, Onye na-ese foto
Na 2008, blog nwere ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu nde ndị nleta nwere ihe ruru ndị debanyere aha 2,000 (email + RSS). Anabeghị m uto na blọọgụ a nke m nwere n'oge gara aga - ọ bụ n'ihi asọmpi m. Mgbanwe ndị a na-arụ n’ọrụ enyeghị m ohere itinye oge na mbọ n’ime blọgụ ahụ m kwesịrị. N'oge na-adịbeghị anya, anọ m na-atụgharị stats ndị ahụ ma m na-alaghachi na-arịwanye elu.
Ana m atụ anya inweta ole na ole na mpaghara ikpeazụ na 2009!
Tags: echiche mgbasa ozimkpachịihe ọsịsedị kausoro nyocha njikarịcha search enginenjikọ slidesharesolomo
Dec 28, 2008 na 8:48 PM
Imirikiti blọọgụ na-apụ apụ, nkọwa onwe onye nke nkeji iri na-akwado na injin ọchụchọ. Ihe na-eju anya abụghị na ụfọdụ dị mma na ụfọdụ adịghị mma, ma ọ bụ na ụfọdụ na-ewu ewu na ụfọdụ anaghị adị. Ọ bụ ihe ijuanya na anyị na-atụgharị uche rie ma kwanyere ugwu ọdịnaya dị ntakịrị karịa karịa mkparịta ụka nkịtị.
M na-ebu amụma na ịkọ ndị na-agụ akwụkwọ – yana ndị na-agụ ganing-ga-esiwanye ike ka ịde blọgụ na-eto eto na ewu ewu. Ọ bụghị ruo mgbe ihe ịtụnanya a kwụsịrị, anyị ga-enwe ike ịtụ anya ịghọta mmetụta ya.